Xalka maanta iyo 7 xubnood. – somalilandtoday.com
Xalka maanta iyo 7 xubnood.
Waa hubaal in xil kastoo aad hayso ay ka dhalanayso masuuliyad iyo waajibaad ku saarmaya ,sida aad xilkaaga u gudato wax markaati ka noqonaya wax adiga kaa soo fula ee falcelin ah sida shaqo wanaag , karti ,dedaal iyo daacadnimo .
Taas bedelkeeda iyadoo awoodahaagii shaqo wanaaga shaydaan kaa qarinayo waxaad ku dhici kartaa fashilaad shaqo iyo xil kasnimo yaraan ku soo food saarayta, oo halkii aad horumar iyo magac iyo sharaf raadin lahayd waxaad ku mashquulaysaa markasta sidii aad shilimaad u heli lahad adigoo ilaawaya alle ka cabsigii iyo mustaqbaliyan wixii ka dhalin kara xilka aad hayso shar iyo khayr.
aad hayso ama Xilka laguu igmaday ogsoonow oo maanka ku hay in ay jiraan kumaankum kula mid ah oo qaban kara una gudan kara xilkaas si kaa wanaagsan adiga balse adigu aad nasiib u heshay , sidaa awgeed wax kula gudboon oo aad gartaa waa guusha u wayn ee aad beri ku faani karto , isla markaana kaa caawinaya in aad noqoto nin bulshadiisa qiimo ku leh oo astaan fiican oo ku dayasho mudan leh.
Ujeedad qormadan aan u qoray waxay daarantahay in aan xasuusiyo 7 xubnood ee Komishanka Doorashooyinka Somaliland ee la magacaabay October,2014 ay maanta tahay maalinta qudha ee sharaftooda iyo karaamadoodu ku jirto gacantooda weli .
sidaa awgeed waxaad Xeer_beegti u tihin sadex Xisbi iyo sadex Taageeryaal oo bulshada somaliland u qaybsantahay , hadii qayb ka mid ah, ama Xisbi ka mid ahi ay kalsoonid idin kala laabto sidoo kale waxaad waydeen kalsooni Taageeryaal kale oo badan oo bulshada ka mid ah.
Waayo Xeerka Doorashooyinka somaliland ee lanbar 20/2001 qaybtiisa 6aad waxay xuquuq badan siinaysaa Codbixiyaasha isla markaana ah taageeryaasha Asxaabta , isla markaana mudan in la tix geliyo.
Waa laydin tijaabiyay oo waxaad soo qabateen doorashooyn sida tii madaxtooyada somaliland , isla markaana khilaaf badan ka dhashay oo dad badan oo aan inaga go,in ku dhinteen qaarna ku dhaawacmeen , cadow badan oo aynu leenahayna ku farxeen.
Ugu danbayn hadii aad doonaysan in markale khilaaf idinka bilaabmaa uu galaafto dad kale oo shicib ah , hadii aad weli doonaysaan lacag , hadii aad rabtaan magac xumo u soo hoyata somaliland , hadii aan go,aankiinu shaqaynayn , hawshiina wata oo halkiina jooga.
Hadii aad sharaf iyo karaamo rabtaan, hadii garaadka laydinku soo doortay idinka run yahay , fadlan oo fadlan is casila oo Kuraasta baneeya , beriba waad ka tegaysaane sharaf kaga taga.